Heano nhanho-nhanho-nhungamiro yemashandisirwo ebvudzi curler, bvudzi rinotwasuka uye bvudzi rinotwasanudza bhurasho.
UNGASHANDISA SEI Bvudzi CURLER Kana iwe uri kushandisa yechinyakare vhudzi curler, hezvino zvekuita. 1. Tora chikamu chebvudzi. Gadzira chikamu chebvudzi kuti curl. Izvo zvidiki chikamu, chakasimba curl. Iyo yakakura chikamu, inosunungura iyo curl. 2. Isa nzvimbo yako yekukomberedza iron. Vhura kiramba yeyako ir ...
Kuchengetedza kwekuchengetedza kwekushandisa kwemidziyo yemumba
Kushandisa • Usambobata zvigadzirwa zvemagetsi kana maoko akanyorova uye tsoka dzakashama. • Pfeka bhutsu yerabha kana yepurasitiki paunenge uchishandisa midziyo yemagetsi, kunyanya kana uri kutsika pasi kongiri uye kana uri panze. • Usambofa wakashandisa chakashata kana chembere mudziyo sezvo izvi zvinga ...
China yekunaka uye yekugadzira bvudzi indasitiri yakatanga kuva indasitiri inosanganisira yakafara ……
China yekunaka uye yekugadzira bvudzi indasitiri yakagadzira kuita indasitiri inosanganisira dzakasiyana siyana minda, kusanganisira kuveura misoro, runako rwechinyakare, runako rwekurapa, dzidzo nekudzidziswa, kushambadzira kwepamhepo nekushambadzira uye mimwe minda yakasiyana. Pakupera kwe2019, chiyero cheChina '...